gases - Synonyms of gases | Antonyms of gases | Definition of gases | Example of gases | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for gases
Top 30 analogous words or synonyms for gases
နိုဘယ်ဂက်စ် နိုဘယ်ဂက်စ် (Noble Gas) ၆ခုကို ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား (Periodic Table)၏ ဒေါင်လိုက်အုပ်စု အမှတ်စဉ်-၁၈ (ယခင်ဇယျားအဟောင်းတွင်အုပ်စု0)တွင် တည်ရှိပါသည်။ Noble gas များသည်အရောင်မရှိ၊ အနံ့မရှိသောဓါတ်ငွေ့များဖြစ်ကြသည်။အက်တမ်တစ်လုံးတည်းနေသောဒြပ်စင်များဖြစ်ကြပြီးဓါတ်ပြုသတ္တိအလွန်နဲသည်။Noble Gases များသည် ဓာတ်တိုးကိန်း ၀ ရှိပြီး အလွယ်တကူ ဒြပ်ပေါင်း မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ၁၉၆၀ တိုင်အောင် အစွမ်းမဲ့ ဓာတ်ငွေ့များ (Inert Gases) ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ အားလုံးသော Noble Gases များ၏ အပြင်ဖက်ဆုံးအီလက်ထရွန် ပတ်လမ်းတွင် တည်မြဲရန်အများဆုံး ရှိနိုင်သော အီလက်ထရွန် အရေအတွက်မှာ ဟီလီယမ်(Helium) တွင် ၂ လုံးဖြစ်ပြီး ကျန် Noble Gases များ တွင် ၈လုံး စီ ဖြစ်ကြပါသည်။
နိုဘယ်ဂက်စ် ၎င်းတို့၏ Noble gases ဖြစ်သော၏ဂုဏ်သတ္တိများကို ခေတ်သစ်အက်တမ်တည်ဆောက်ပုံသီအိုရီဖြင့် ရှင်းပြနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ အပြင်ဘက်ဆုံး shell တွင် valence အီလက်ထရွန် ၈လုံး (ဟီလီယမ်တွင်၂လုံး) ပြည့်ခြင်းကြောင့် ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းတွင်ပါဝင်ရန်(စိတ်သဘောထား)အစွမ်းအနည်းငယ်သာ ရှိစေသည်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါ noble gas တို့၏ ဒြပ်ပေါင်း ရာဂဏန်း အနည်းငယ်သာ ပြုလုပ်နိုင်သေးသည်။ noble gas အချင်းချင်းတို့သည် အရည်ပျော်မှတ်နှင့် ဆူမှတ်နည်းငယ်သာကွာခြားသည်။
ညစ်ညမ်းဓါတ်ငွေ့လျှော့ချရေး နိုင်ငံတာကာစာချုပ်များ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) အဖွဲ့က ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အပူချိန်မြင့်တက်လာမှာ အဓိက အကြောင်းရင်းက အစိမ်းရောင် ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ (Green House Gases) ကြောင့်ဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေထဲမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (Carbon Dioxide)၊ မီးသိန်း (Methane)၊ နိုက်စ်ထရိုက်စ်အောက်ဆိုဒ် (Nitrous Oxide) နဲ့ ကာဗွန်မိုနော့ပ်ဆိုဒ် (Carbon Monoxide) တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဖလိုရင်း ဖလိုရင်း (Fluorine- ဓာတုသင်္ကေတ F) သည် ဒြပ်စင်အားလုံး၏ အီလက်ထရွန် အနုတ်လက္ခဏာနှင့် ဓာတုဓာတ်ပြုနိုင်မှု အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ စိမ်းဝါရောင် နှင့် Gaseous halogen ပေါင်းစည်းအား (၁) ရှိ သည်။ ဖလိုရင်းသည် Noble gases ဖြစ်သော Krypton, xenon ,radon နှင့် အခြားသော ဒြပ်စင်များနှင့် ဓာတ်ပေါင်းများ ဖြစ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။ ထို့အပြင် ဖန်၊ သတ္တု၊ ရေ နှင့်အခြားသော အရာဝတ္ထုများနှင့်လည်း ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ဖလိုရင်း ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် မီးတောက်ကို ပိုမို တောက်စေနိုင်ပါသည်။ အပေါင်းလက္ခဏာ ရှိသော counterpart အချို့နှင့် ဖလိုရိုက် ပေါင်းစပ်၍ ဖလိုရင်း ဓာတ်ပေါင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဟီလီယမ် ဟီလီယမ် () သည် ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား (Periodic table) ၏ အုပ်စု အမှတ် သုည (Group -0) တွင်ရှိသော Noble gases များထဲမှ ဓာတ်ငွေ့ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပြီးလျှင် ဒုတိယ အပေါ့ဆုံးသော ဓာတ်ငွေ့ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဟီလီယမ်ဓာတ်ငွေ့ အဓိကအရင်းအမြစ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ဟီလီယမ် သည် အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာ မရှိသည့်အပြင် အဆိပ်မဖြစ်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အခြားဓာတ်ငွေ့များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှု နည်းသည်။ ၎င်းသည် အခြားသော ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများနှင့် မလိုအပ်လျှင် ဓာတ်မပြုပါ။ ဟီလီယမ် ဓာတ်ငွေ့များသည် သိပ်သည်းဆ နည်းပါသည်။ ၎င်း၏ အပူစီးကူးနိုင်မှု နှင့် ကယ်လိုရီပမာဏ ပါဝင်မှုနှုန်းသည် သိသာစွာ မြင့်မားပါသည်။ ဟီလီယမ်သည် ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်း ရှိသော်လည်း ၎င်း၏ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ အပူချိန်မှာ ဒြပ်စင်အာလုံးထဲတွင် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများသည် အခဲမျက်နှာပြင်မရှိဟုဆိုနိုင်သည်။ Gas giants are commonly said to lack solid surfaces, but it is closer to the truth to say that they lack surfaces altogether since the gases that make them up simply become thinner and thinner with increasing distance from the planets' centers, eventually becoming indistinguishable from the interplanetary medium. Therefore landing onagas giant may or may not be possible, depending on the size and composition of its core.
ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ The rather misleading term has caught on because planetary scientists typically use "rock", "gas", and "ice" as shorthands for classes of elements and compounds commonly found as planetary constituents, irrespective of what phase the matter may appear in. In the outer solar system, hydrogen and helium are referred to as "gases"; water, methane, and ammonia as "ices"; and silicates and metals as "rock". When deep planetary interiors are considered, it may not be far off to say that, by "ice" astronomers mean oxygen and carbon, by "rock" they mean silicon, and by "gas" they mean hydrogen and helium.